Wiil 12 jir ah oo shalay la xiray muddo gaaban kadib markii uu ku tuuray ukun madaxweyne Yuusuf iyo Wasiirka gaashaan dhigga Yuganda oo ka dhoofay Xamar kadib markii uu la kumlmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaaka ah ee Soomaaliya. Ruunkinet 23/02/07
Kulan uu shalay la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya suxufiyiin isugu jira caalami iyo kuwa Soomali ah ayaa waxaa uu ka dhacay Chagham House ee magaalada London.
Kulankan ayaa la sheegqay in uu soo qabqab qaabiyay safiirka u fadhiya dowladda Itoobiya magaalada London.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo halkaasi ka hadlayay ayaa si weyn ugu mahad celiya safiirka dowladda Itoobiya iyo dadkii halkaas isugu yimid asagoo sheegay in ay Soomaaliya gashay barwaaqo aan horay loo arag.
Sidoo kale, madaxweynaha mar uu ka jawaabayay goorta ay ka bixi doonaan ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay ciidamada Itoobiya ka bexeen dalka balse ay joogaan qaar yar oo tabar ciidan u jooga.
Qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Igriiska oo halkaasi joogay ayaa buuq ku sameeyay madaxweynaha ayagoo ku qeylinayay in uu madaxweynaha yahay nin dalkiisa Itoobiya ka iibsaday.
Sidoo kale, markii uu madaxweynaha ka baxayay goobtaasi ayaa wiil 12 jir ah oo ka mid ahaa dadkii ku buuqayay madaxweynaha waxaa uu ku tuuray ukun Col. Cabdullahi Yuusuf taasoo sababtay in wiilkaasi la xiro muddo gaaban kadibna la sii daayay.
Dhanka kale, waxaa maanta ka tagay magaalada Muqdisho wasiirka gaashaan dhigga dowladda Yuganda iyo wafdi uu hoggaaminayay.
Wasiirka dowladda Yuganda oo horay u tagay magaalada Baydhabo ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiiir ku xigeenka dowladda xildhibaan Salaad Cali Jeelle.
Dowladda Yuganda ayaa la filayaa in ay ciidamada keento dhawaan Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan nabadgelyada sida ay sheegtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.